R/Wasaaraha Soomaaliya oo Maanta tagayo magaalada baydhabo. – Gedo Times
R/Wasaaraha Soomaaliya oo Maanta tagayo magaalada baydhabo.
Ra’isal wasaaraha xukuumaddda soomaliya Xasan Cali kheyre iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa maanta gaarayo magaalada beydhabo ee Xarunta gobalka bay islamrkaana ah xarunta ku meel gaar ka ahi ee maamulka koonfur galbeed soomaaliya uu ku shaqeeyo.
Wafdiga reysal wasaaraha soomaliya xassan cali kheyre ayaa waxaa qeyb ka ah xildhibaanada labadda aqal iyo wasiiradda kasoo jeeda maamulka koon fur galbeed soomaliya.
Reysal wasaare kheyre ayaa lagu waday markii uu baraawe tagay inuu halkaasi kaga sii baxo islaamrkaana uu tago magaalada beydhabo ee xarunta gobalka bay wallow isaga oo baraawe ku maqan ay xilkii wasaarada maareynta iyo masiibooyinka ee xukuumadda soomaliya ay iska caishay wasiirkii wasaaradaaasi DRS maryam khaasim taasina ay keentay inuu kusoo laabto reysal wasaare kheyre magaaalda muqdisho.
Warar madax banaan oo uu helay gedotimes ayaa sheegaya in reysal wasaare kheyre sababaha uu u tagayo magaalada beydhabo ay tahay inuu halkaasi uu kula soo hadlo ciidmada xooga dalka soomaliyeed si,ay ugu diyaar garoobaan dagaal lagu qaadayo alshabaab maaadaama dowalda soomaliya ay iclaamisay dagaalkaasi.
Daawo:Hay’adda Socdaalka iyo jinsiyadda Soomaaliyeed deeq lacageed waxa ay maanta ku wareejisay gudiga Gurmadka Qaran
Galmudug oo Shacabka Somaliland ugu baaqay inay ka shaqeeyaan Midnimada Umada(Warsaxaafadeed).